तपाईंको साइट दृश्यात्मकतामा सुधार गर्न कतिवटा लिंकहरू आवश्यक छ?
अप्टिमाइजेसन बिन्दुबाट, लिङ्क उत्पादन प्रक्रियाले अन्य वेब स्रोतहरूबाट हाइपरलिंकहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। यसको माध्यमबाट विभिन्न लिङ्क निर्माणका तरिकाहरू जस्तै ब्लग पोस्टिंग, ब्याकलिङ्क टिप्पणीहरू, प्रेस विज्ञप्ति र आदि।. यी सबै गतिविधिहरू तपाईंको ब्रान्डको विश्वसनीयता दिन र तपाईंको उद्योग प्रतिष्ठा बढाउनेछ तपाईंको उद्योग भित्र. खोज ईन्जिनियरिङ् लिङ्कहरूको सम्बन्धमा जुन तपाईंको साइटलाई डिजिटल मतको रूपमा र तपाईंको पास ठूलो मतहरूको ठूलो राशि हो, तपाईको साइट एक SERP मा हुनेछ।.
तथापि, वास्तविकतामा सबै मतहरू बराबर छन्. त्यहाँ धेरै स्प्यामी प्रविधिहरू छन् जुन खोजी इन्जिनहरू बेवकूफ सेवा गर्छन् र अझै पनि कम गुणस्तरको सामग्रीको साथ उच्च श्रेणी पाउँछन्. यद्यपि, कहिलेकाहीं, तपाईं आफ्नो डोमेन वरपर धेरै कम गुणस्तर इनबाउन्ड लिङ्कहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, जानुभएको छ. आजकल, Google र अन्य ठूला खोज ईन्जिनियरिङ्ले दुर्व्यवहार लिंक लिङ्क निर्माण गतिविधिहरु जस्तै लिंक खेती, लेख स्प्याम र स्प्यामी ब्लग टिप्पणिहरु को साथ सक्रियता संग संघर्ष गर्दछ।. हालै, Google ले नयाँ श्रेणी एल्गोरिदमको स्थापना गरे अनुसार सबै कम गुणस्तरको ब्याकलिङ्कहरूलाई हटाउन आवश्यक छ. अन्यथा, एक वेब स्रोत या त Google द्वारा deindexing हुन सक्छ, वा रद्द गर्ने स्थानहरू जुन रैंकिंग ड्रपमा जान्छ. यही कारणले, आजकल, इनबाउंड लिंकहरूको गुण तिनीहरूको मात्रा भन्दा उच्चको सराहना गरिन्छ. यसको अर्थ छ कि तपाईंले स्रोतको अख्तियार र प्रासंगिकता जाँच गर्न आवश्यक छ जुन तपाइँसँग लिङ्क राख्नेछ.
जब तपाईंको वेब स्रोतको लागि PageRank आउछ, यो तपाईंको साइटमा आउने लिङ्कहरूको रैंकिङ द्वारा निर्धारण गरिन्छ।. यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईं कम पीआर संग वेब पृष्ठहरु संग जोडिएको हो भने, तपाईंको आफ्नै पेजरैंक बढ्न नहीं हुनेछ.
यही कारणले प्रासंगिक उच्च पीआर वेबसाइटबाट एक क्वालिटी ब्याकलिंक हजारौं कम-गुणस्तरको तुलनामा अधिक हुनेछ. अपरिभाषी एसईओ प्रदायकहरू द्वारा प्रयोग गरिएको कम रैंकिंग लिङ्कहरू, धोखाधड़ी लिङ्क निर्माण गतिविधिहरु द्वारा प्राप्त, केवल तपाईंको वेबसाइट एसईओ को नकारात्मक असर नगर्ने, तर तपाईंको कर्पोरेट छवि र प्रतिष्ठा लाई पनि विनाश गर्दछ।.
उच्च पेजरङ्कको साथ आला सम्बन्धित वेबसाईटहरूको मूल्यवान ब्याकलिङ्कहरू तपाईंको व्यापारलाई अझ समृद्ध बनाउनेछ र खोज इन्जिनहरूले तपाईंको साइटको बारे कस्तो निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ।.
Google मा ऊंचे स्थान को कितने लिंक को आवश्यकता छ?
यो प्रश्न उठाउन कुनै पनि बिन्दु छैन जसमा यसको उत्तर तपाईको उद्योग र ब्रान्ड उमेरमा निर्भर हुनेछ. एक डोमेनले केवल उच्च उच्च गुणवत्ता ब्याकलिङ्क को खोज परिणाम पृष्ठ मा उच्च श्रेणी को आवश्यकता छ, जबकि अन्य डोमेन को यसको प्राधिकरण को बढाने को लागि र धेरै प्रतिष्ठित लिंक को आवश्यकता हो र यसको प्रतिष्ठा को बेहतर बनाइन्छ।. निस्सन्देह, त्यहाँ धेरै अन्य स्तरिय सिग्नलहरू छन् जुन खोजी परिणामहरूमा वेबसाइटको स्थितिमा योगदान गर्दछ.
उत्तम ब्याकलिङ्क के हो?
उत्तम प्रकारको ब्याकलिङ्कहरू जैविक बाह्य लिङ्क हुन्. तिनीहरू तपाईको सोध बिना तपाईको साइटमा आउँदछ र जब तपाईलाई आशा गर्नुहुन्न. यी लिङ्कहरू प्रासंगिक र लोकप्रिय ब्लगहरू वा वेबसाईटहरूबाट प्राप्त गरेका छन् जुन तपाईंको सामग्रीको अत्यधिक मूल्याङ्कन गर्दछ र उनीहरूको पाठकहरूसँग साझेदारी गर्ने निर्णय गर्छन्. एक नियमको रूपमा, यी प्रकारको पछाडि सम्बन्धित लिंकहरू सान्दर्भिक वेब स्रोतहरूबाट प्राप्त गरिन्छ र लिंक गरिएको साइटमा धेरै ट्राफिक ल्याईन्छ.
तथापि, यो तपाईंको बजार आकृतिमा विश्वसनीय वेबसाइटहरूबाट कार्बनिक लिंक प्राप्त गर्न गाह्रो छ. तपाईंको वेब स्रोत प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै मान हुनुपर्छ र उच्च प्रतिष्ठा उद्योगका नेताहरूको आगमन आगमन प्राप्त गर्ने मौका पाउनु पर्छ Source .